Madaxa Xirirka Kubadda Cagta FA Oo Ku Dhawaaqay Inuu Iscasilayo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Madaxa Xirirka Kubadda Cagta FA Oo Ku Dhawaaqay Inuu Iscasilayo
(13-12-2018) Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ayaa dhamaadka xili ciyaareedkan waayi doona agaasimahoodii fulinta Martin Glenn, kaas oo ka bixi doona shaqadooda.
Martin Glenn ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu soo afjarayo saddex sannadood iyo badh uu yahay shaqada ugu sarraysa ee xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ee magaciisa loosoo gaabiiyo FA, waxaana uu tilmaamay inuu dareensan yahay in guulo badan la gaadhay waqtigii uu talinayey.
“Waxa aan tegayaa anigoo u hanweyn guulaha bandhigga dhamaan kooxaha Ingiriiska, waxaanan ku kalsoonahay in aanu St. George’s Park ka unugnay xarun heer caalami ah oo u xaqiijinaysa kooxaha inay sii wadaan dhismaha guulahooda.” Sidaas ayuu Martin Glenn ku yidhi war-saxaafadeedkiisa.
Dhinaca kale xidhiidhka kubadda cagta FA ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ugu qireen Glenn in waxqabadkiisii iyo hab-dhaqankiisii xarunta St George’s Park iyo weliba kooxaha Ingiriisku ay horseed ka noqotay guulo aan la qiyaasi karin xilligiisii.
Si kastaba ha ahaatee, marka uu Glenn ka dego xilka dhamaadka xili ciyaareedka 2018-19 ayaa waxa la dooran doonaa madax kale oo xilka kala wareega.